You na-ahụ ihe nnweta Google? | Martech Zone
You na-ahụ ihe nnweta Google?
Tuesday, October 23, 2012 Douglas Karr
Googlebot bụ Google's web crawling bot (mgbe ụfọdụ a na-akpọkwa "ududo"). Crawling bụ usoro Googlebot choputara peeji ohuru na nke emelitere iji tinye na ntaneti Google. Anyị na-eji nnukwu kọmputa iji iweta (ma ọ bụ "iri ari") ọtụtụ ijeri peeji nke na weebụ. Googlebot na-eji usoro algorithmic eme ihe: mmemme kọmputa na-ekpebi saịtị ndị ị ga-egwu, ugboro ole, na ole peeji iji weta na saịtị ọ bụla. Site na Google: Googlebot
Google fetches, crawls na captures ọdịnaya peeji gị dị iche na ihe nchọgharị. Mgbe Google nwere ike igwu edemede, ọ na-eme ọ bụghị pụtara na ọ ga-aga nke ọma mgbe niile. Na n'ihi na ị nwale ntụgharị n'ime ihe nchọgharị gị ma ọ na - arụ ọrụ, ọ pụtaghị na Googlebot na - emegharị okporo ụzọ ahụ n'ụzọ ziri ezi. O were ụfọdụ mkparịta ụka n'etiti ndị otu anyị na ụlọ ọrụ nnabata tupu anyị achọpụta ihe ha na-eme… na isi ihe iji chọpụta bụ iji Were dika Google ngwaọrụ na Webmasters.
Nweta dịka ngwa Google na-enye gị ohere ịbanye ụzọ n'ime saịtị gị, lee ma Google nwere ike iri ya, ma hụ ọdịnaya ejiri ariọ dị ka Google na-eme. Maka onye ahịa mbụ anyị, anyị gosipụtara na Google anaghị agụ edemede ahụ ka ha gaara atụ anya ya. Maka onye ahịa anyị nke abụọ, anyị nwere ike iji usoro dị iche iche weghachite Googlebot.
Ọ bụrụ na ị hụ Crawl Njehie n'ime Webmasters (na ngalaba Ahụike), jiri Fetch dị ka Google iji nwalee redire gị wee lelee ọdịnaya Google na-eweghachite.
Tags: ozi kpọtara dị ka googlebotgooglebotududo
Dị ka anyị! Nyocha nke Ndị Ọrụ na Njikọ Aka
Ọchịchị Na-arịwanye Egwu nke Nchọgharị Mobile